Zimbabwe marks 37 years of independence amid economic crisis | Daily Mail Online
Published: 09:44 EST, 18 April 2017 | Updated: 09:51 EST, 18 April 2017
HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwean President Robert Mugabe has marked the country's 37th anniversary of independence with a call for tranquility even as the economy has collapsed to the point where livestock is being accepted in place of cash.
A grasshopper sits on Zimbabwean President Robert Mugabe's hand as he inspects the guard of honour during the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Robert Mugabe delivers his speech during the country's 37 Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Soldiers carry Zimbabwe's President Robert Mugabe's portrait during the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A grasshopper is seen near Zimbabwean President Robert Mugabe as he inspects the guard of honour during the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Robert Mugabe is assisted to light up the Independence flame during the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Robert Mugabe attends the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A woman celebrates during Zimbabwe's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Security personnel surround Zimbabwean President Robert Mugabe's car upon arrival for the country's 37th Independence celebrations in Harare, Tuesday, April, 18, 2017. Zimbabwe is celebrating 37 years of Independence from British colonial rule with the ruling Zanu Pf party calling on patriots to uphold and cherish the values that informed the liberation struggle. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)